Spondyloarthrosis: soritr'aretina, fitsaboana, fikarakarana | Tontolo alika
Rachel Sanchez | | aretina
Misy fisafotofotoana lehibe eo amin'ny sehatry ny osteoarthritis canine, ny karazany, ny subgenres ary ny fitsaboana. Ny iray izay mahaliana antsika amin'ity indray mitoraka ity dia ny antso ossifying spondyloarthrosis, aretina mihasimba izay misy ny hazondamosin'ny alika, indrindra ireo efa be taona. Eto isika dia miresaka momba io aretina io, ny soritr'aretiny, ny fitsaboana mety ary ny fikarakarana fototra.
1 Inona no atao hoe ossificans spondyloarthosis?
2 Soritr'aretina lehibe
4 Diagnostika sy fitsaboana
5 Fitsaboana fanampiny
6 Fikarakarana fototra
Inona no atao hoe ossificans spondyloarthosis?
Antsoina koa ity aretina ity manala ny spondylosis sy ny parrot, na dia misy aza ny tsy fitoviana kely eo amin'izy ireo dia tsy hitan'ny manam-pahaizana manokana amin'io sehatra io.
Miorina amin'ny a dingana miadana miadana Misy fiantraikany amin'ny ligament intervertebral izany. Izy io dia miavaka amin'ny fisehoan'ny taolam-paty (antsoina hoe colloqually antsoina hoe "parrot beaks") amin'ny faritra ventral an'ny vertebrae.
Matetika izy ireo dia eo anelanelan'ny ny faritra lumbosacral na thoracolumbar, izay faritra iainana ny hetsika lehibe indrindra rehefa manao hetsika ara-batana ilay biby. Izany no mahatonga ny alika miasa amin'ny ambaratonga lehibe kokoa, na dia matetika koa aza ny alika zokiolona, ​​lehibe izay miaritra karazana tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny tonon'izy ireo: ratra amin'ny lohalika, lamosina, dysplasia hip, sns.
Ny taolana dia mamoaka endrika izay vokatr'io aretina io ary mamoaka fifandirana ao amin'ireo sela malemy manodidina azy ireo; izany hoe ao amin'ny hozatra sy hozatra. Mahatonga izany soritr'aretina toy izao manaraka izao:
Fanaintainana amin'ny hazondamosiko
Fanaintainana amin'ny faritra kibo.
Ny hozatry ny hozatra.
Fivontosana ny hazondamosina.
Ankoatra ny vokany ara-tsaina. Ireo tsy fahatokisan-tena rehetra ireo dia miteraka tsy firaikana, fahaketrahana ary tsy fahazotoan-komana amin'ny alika, ankoatry ny olana hafa. Azo inoana koa fa handositra ny safosafo izy, handà ny diany ary haneho fihetsika mahery setra ateraky ny fanaintainana mihitsy.
Ny antony mahatonga ny spondyloarthrosis dia mitovy amin'ireo karazana osteoarthritis. Ny antony mahazatra indrindra dia be loatra ara-batana, omena amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena tafahoatra. Ny mety hafa dia ny fahasembanana eo amin'ny hazondamosina rehefa teraka, microtrauma ary fanovana tazomoka.
Diagnostika sy fitsaboana
Manoloana ny iray amin'ireto soritr'aretina ireto dia tokony hodinihin'ny mpitsabo biby ny alika. Ity iray ity dia hanao fampisehoana fandalinana radiografika momba ny hazondamosina hanamafisana na hialana amin'ny osteophytes na taolana exostose ao amin'ilay faritra. Amin'ny fotoana maro dia dinihina ihany koa ny fandinihan-tena momba ny neurolojia mba hahalalanao raha misy aretina azo avy amin'ity karazana ity.
Raha voamarina ny aretina dia hitantana fitsaboana izay miankina amin'ny fanjakan'ny aretina ny manam-pahaizana. Zava-dehibe ny fahalalana izany spondyloarthrosis tsy misy fanasitranana, fa ny soritr'aretiny kosa dia azo fehezina miaraka amin'ny fanafody sasany sy fomba sasany.
Ny tena tanjona dia ny fanamaivanana ny fivontosana sy ny fanaintainan'ny sela mifanila amin'ny hazondamosina, izay itantanana azy ireo fanafody anti-inflammatoire nonsteroidal ary, matetika, chondroprotectors. Soso-kevitra ny hamenoana ity fitsaboana ity amin'ny programa fanarenana. Misy ihany koa ireo manome sosokevitra momba ny akupunktur. Mazava ho azy, izany rehetra izany dia tokony hotandreman'ny mpitsabo biby foana.
Una sakafo mahavelona fanalahidy lehibe iray hafa hanatsarana ny ain'ny biby io. Ny fihinanana vitamina C dia tena soso-kevitra, izay manohana ny fananganana collagen, amin'izay hampihena ny fivontosana. Etsy ankilany, ny vitamina B12 dia manamafy ny firafitry ny taolana ary ny niacinamide dia manatsara ny metabolisman'ny tazomoka.
Ankoatra izany, Ny fisorohana ny lanjany be loatra dia hanampy antsika hampiadana ny fivoaran'ny aretina ary mampiroborobo ny fivezivezena ampy amin'ny can. Toy izany koa, imbetsaka matetika ny fitsaboana fitsaboana hafa toy ny akupunktur, hydrotherapy na massage dia tena mahasoa.
Avy any an-trano dia afaka mandray fepetra ihany koa isika hanampiana ny alika hiatrika an'io olana io. Azontsika atao ny mamintina azy ireo amin'ny:
Sorohy ny mitsambikina na midina avy eny amin'ny avo be. Ny tsara indrindra dia ny mametraka pouf kely, lalantsara na tohatra eo akaikin'ny farafara sy ny sofa. Amin'izany fomba izany no ahafahan'ny biby miakatra sy midina nefa tsy mandratra lamosina.
Fanatanjahan-tena antonony Fahadisoana mahazatra indrindra dia ny fanakanana ireo karazana hetsika ara-batana rehetra mba hiarovana ny alika, fa amin'izany fomba izany no mahatonga ny vokany mifanohitra amin'izany. Ilaina ny mandeha an-tongotra maivana mba hitazomana ny fahasalamanao, fa tsy hampihenjana ny biby mihitsy.
Aza atao tohatra. Ny fiakarana sy fidinana amin'ny tohatra dia manery ny alika hihetsika tampoka eo amin'ny hazondamosiny, ka tsara kokoa ny manalavitra azy amin'izy ireo. Raha tsy azo atao izany dia mila manampy ny tenantsika isika mba tsy ho ketraka loatra ny hazondamosiko.
Fanorana an-trano. Azontsika atao ny mangataka mpitsabo aretin-koditra hilaza aminay ny fomba fanorana ny vatan'ny alika mba hanamaivanana ny soritr'aretiny. Noho izany dia manamafy ny vokatry ny fitsaboana ny biby izahay.
Fanaraha-maso ny biby. Raha ilaina foana izy ireo, rehefa mijaly amin'ny aretina ny biby fiompintsika dia lasa zava-dehibe kokoa ny fanadin-jaza. Toy izany koa, tsy maintsy mitodika any amin'ny matihanina isika amin'ny fanontaniana na olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Spondyloarthrosis: soritr'aretina, fitsaboana, fikarakarana
Mampiavaka sy fikarakarana ny Espaniola Alano